Guriga - Gobolka Washington Caymiska Caafimaadka - CHPW
Hal qorshe. Daryeelkaaga oo dhan.
Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington (CHPW) Apple Health qorshayaasheeda ayaa laga dhisay hareerahaaga. Waxaan u fidinaa daryeel maxalli ah iyo faa'iidooyin ballaaran qoyska oo dhan.
Waxbadan Ka Baro ➔
Barnaamijka abaalmarinta ChildrenFirst just ayaa hadda soo fiicnaadayAkhri wax dheeraad ah
Waa tan waxa aad u baahan tahay inaad ogaato kahor intaadan isqorin.
SI AAD AKHRISO →
Ka kasbado Amazon, Target, ama Safeway booqashooyinka dhakhtarka.
Xubin ahaan CHPW ahaan, waxaad heli kartaa muraayado lacag la'aan ah oo leh waxyaabo lagu daro qiimo jaban.
CHPW WAA LA FIDAYAA!
Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington hadda wuu shaqeynayaa Clallam, Jefferson, iyo Kitsap gobolada. Booqo khariidadayada caymiska oo soo ogow haddii CHPW laga heli karo aaggaaga.
Eeg khariidada ➔
Sii akhriso ➔
Kaligaa ma tihid: Ku rog dheji nashqadeysan ee Warbixinteena Sannadlaha ah si aad u aqriso oo u maqasho sida qaar ka mid ah dhacdooyinka aan caadiga ahayn ee 2020 ay gacan uga geysteen qeexidda - iyo dib-u-qeexidda - ururkeenna.
Waxaad tahay bartamaha bulshadaada. Iyo xaruntayada.
Qoyskaaga, asxaabtaada, iyo bulshadaadu adiga ayey kugu tiirsan yihiin. Laakiin adiguba waxaad u baahan tahay taageero. Caynsanaanta daryeelka caafimaad ee CHPW waxay u adeegtaa baahiyahaaga iyo yoolalkaaga, adiga oo diiradda saaraya adiga qof ahaan guud ahaan. Taas waxaa ka mid ah dadka aad daryeesho iyo bulshada aad ka tirsan tahay.
MA XAQ U LEEYAHAY?
Si aad u ogaato haddii qorshaha Apple Health uu adiga kugu habboon yahay, eeg shuruudaha.
Hubi u-qalmitaanka →
Waxaan la shaqeynaa kumanaan dhakhtar iyo takhasus gaar ah gobolka oo dhan. Eeg haddii kaagu ku jiro shabakadeena.
Raadi bixiyeyaasha →